Muuse Biixi oo ka hadlay muranka Siyaasadeed ee ka taagan Somaliland | dayniiile.com
Home WARKII Muuse Biixi oo ka hadlay muranka Siyaasadeed ee ka taagan Somaliland
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreeysay ka hadlay khilaafka ka taagan doorashada Madaxtinimada Maamulkaas, taas oo u dhaxeeysa mucaaradka iyo Xukuumadda iyo sidoo kale dibadbaxyadii Xisbiyada mucaaradka ka dhigeen Magaalada Hargeysa.
Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu sheegay in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay in uu banaanbaxo oo uu fikirkiisa uu ku cabiro isku soo bax, Qoraal ama Sawir balse ay jiraan xeerar loo baahan yahay in la maro sida in la ilaaliyo Amniga inta ay socdaan banaanbaxyada.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi kudaray in Xukuumadda Somaliland marnaba diidaneyn in bannaabax la dhigo balse looga baahan yahay Xisbiyada inay codsi soo gudbisadaan maadaama Xukuumadda ay mas’uul ka tahay Amniga guud ee Somaliland, isaga oo u mahad celiyay Golaha Wakiilada.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Xisbiyada mucaaradka ay ku eedeeyeen in uu doonayo muddo kororsi, wuxuuna sheegay in uusan laheyn awoodaas, isla markaana uu diyaar u yahay in doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa degaannada Somaliland ka taagan muran la xiriira doorashada, kaas oo u dhaxeeya Xukuumadda & mucaaradka, waxaana Ciidamada Booliska ay Magaalada Hargeysa ku xir xireen Mas’uuliyiin & Xubno katirsan Xisbiyada mucaaradka oo bannaanbax dhigayay halka qaarkood lagu dhaawacay rasaas ay fureen Ciidamada Booliska.
Previous articleRa’iisul wasaaraha Canada oo laga helay Xanuunka Covid-19
Next articleWeeraro Bambaano oo lagu qaaday Saldhigyo kuyaalla Muqdisho
Taliska Saldhigga Booliska Bandiiradleey oo la guddoonsiiyay Gaari ay ku shaqeeyaan
LACAGTA YOUTUBE – Sameynta & Shuruudaha (Tutorial)